Geek Dictionary, ụfọdụ okwu na-eji na net na anyị adịghị aghọta | Site na Linux
Geek Dictionary, ụfọdụ okwu na-eji na net na anyị adịghị aghọta
Ọtụtụ n'ime anyị mgbe ụfọdụ furu efu (ma ọ bụrụ na ọ bụghị kpam kpam) mgbe anyị na-agụ ụfọdụ ihe na forums ma ọ bụ saịtị n'ozuzu metụtara teknụzụ.
Ọtụtụ oge anyị anaghị aghọta ụfọdụ acronyms ma ọ bụ acronyms dị iche iche anyị na-achọta n'ọtụtụ azịza sitere n'aka ndị ọrụ ndị ọzọ toro eto ma mara asụsụ nke netwọkụ nke netwọkụ.
Mgbe ụfọdụ anyị na-eche na ha na-awakpo asụsụ ala anyị, mana, ọ bụ ezie na abụ m ezigbo onye na-agbachitere ịsọpụrụ nkwanye ugwu na idebe iwu n'oge mgbanwe na ọrụ anyị n'ịntanetị, ọ bụ obere eziokwu na ọ dịghị mgbe ịmara ihe nke ọ bụla n'ime ndị a pụtara obere okwu.
Ya mere, echere m na ọ dị mma ịkọrọ ndị na - agụ akwụkwọ anyị obere kọmịdịda nke geek acronyms na ihe ha pụtara. Tupu ịmalite, Achọrọ m ịkọwapụta na mmasị m abụghị iji kpalie iji okwu ndị a eme ihe, ebumnuche bụ naanị ịbawanye ụwa nke ihe ọmụma ntakịrị: masịrị ya ma ọ bụ na ọ bụghị, a na-eji asụsụ a eme ihe ma ọtụtụ ndị otu obodo anyị na-eme ihe. ndị ọkachamara na ya. jiri ya. Na-ebughi n'ihu, nke a bụ nchịkọta nke ọkọwa okwu Geek ...
Ana m eme ka o doo anya na ọ dị nwute na ọtụtụ okwu m hapụrụ n'okpuru nwere ihe dị njọ, yabụ echere m na ọ ga-enyere gị aka ịmara ịdị adị ya, ebe ọ bụ na ebe a na GUTL anyị nwere iwu anyị na oke mmejọ agaghị anabata na kwuru. Ghọta ebe a, ebe ị na-aga.
Ka na-amalite na nọmba:
4U: Maka gị, maka gị.
4S: Maka anyi, diri anyi.
121: mmasị maka mmadụ. N'ebe ụfọdụ forums "121.gif" bụ akara ngosi na-egosipụta nsọpụrụ na otuto nye onye ọrụ ọzọ.
1337: / Liit / Leet na-ekwu ma ọ bụ na-ekwu okwu (1337 5p34k ma ọ bụ 1337 na ederede leet nke anyị ga-atụle n'isiokwu ọzọ) bụ ụdị ederede na mkpụrụedemede mkpụrụedemede nke ụfọdụ obodo na ndị ọrụ nke ntanetị dị iche iche na-eji.
Nke anọ: Ruo mgbe nile ebighị ebi
AFK: acronym for “Away From Keyboard”, n’asụsụ Spanish “N’ebe ahụ na igodo”, a na-ejikarị ya, tụmadị na izipụ ozi ngwa ngwa na egwuregwu vidio n'ịntanetị, iji gosi na onye na-anọghị ma ọ bụ na enweghị ike ịga ya, n'ụzọ nkọwa "pụọ na keyboard" .
ASAP: "Ozugbo enwere ike". Ozugbo enwere ike. A na-eji ya dị ka mmezu iwu mgbe mmadụ tụrụ anya azịza ya.
ASL: "Afọ, mmekọahụ na ọnọdụ". Ejiri ya na nkata ịjụ maka data nke onye ị na-agwa okwu, afọ, okike na ebe.
AFAIK: "Dị ka m madebere". Dị ka m madebere.
ATM: acronym for "N'oge a" (n'asụsụ Spanish: n'oge a).
AKA: "A makwaara dị ka" (nke a makwaara) ka eji zoo aha onye ọzọ
BRB: / bérbe / Be Right Back (na Spanish: Aga m anọ azụ).
BBL: acronym for "Be Back Later" (n'asụsụ Spanish: Aga m alọghachi azụ).
BRT: Na Na Na (na Spanish: Aga m anọ ebe ahụ)
BTW: Site n'ụzọ (na Spanish: n'agbanyeghị ...)
BFN: Ka ọ dị ugbu a (n'asụsụ Spanish: goodbye for now)
BBBye bye (in Spanish: goodbye)
Nkịtị: Onye ọkpụkpọ nke na ụfọdụ egwuregwu egwuregwu n'ịntanetị, karịsịa na Fps, na-anọgide na-enweghị ike ịnọ ebe na-echere onye iro, kama ịga maka onye iro.
CT: Eji Aghọ Aghụghọ Ule Isiokwu, eji Aghọ Aghụghọ Ule Tebụl maka eji Aghọ Aghụghọ Ule Engine
CYA: ebe C na-ada ka "ihu" na YA na-ada ka "gị", zoro aka na "hụ gị" na-ezo aka "Aga m ahụ gị ma emechaa".
Ihe mgbawa: bụ onye na-emebi nche nke sistemu kọmputa maka uru onwe ya ma ọ bụ naanị imerụ ahụ.
CDT- Mmeghe eji maka Change nke Isiokwu.
COD: Mbipu nke egwuregwu "Oku ọrụ"
DI: Mkpirisi maka "Enweghị nsogbu."
Ejila troll nri: in Spanish “Ejila nri troll”. A na-eji ya dị ka nkwanye iji zere ịdaba na mkpasu iwe nke trolls.
DDMAM "Emegharịla m ọzọ" pụtara ... atụgharịkwala m ọzọ
DD: “Onye na-emebi emebi” (onye na-ere mmebi) onye na-ahụ maka ọrụ kachasị maka mmebi ahụ.
DPM: “De puta madre”, eji mgbe ihe na-aga nke ọma, n'ụzọ nkịtị
Dx: Ọ bụ ihu iwe, abụghị "xD"
D+: Spanish nsụgharị "De Más", gosipụta ihe dị oke mma, nke a na-ejikarị na Nkata "
FF: acronym of, na Bekee, "Fucking Fucker", nke a ga-asụgharị "Fuck bastard!" ma ọ bụ ndebiri nke "Ọgụ Ikpeazụ"
FFS: acronym for, na Bekee, "For Fuck's Sake", nke a ga-asụgharị "Fuck, maka ihunanya Chukwu!"
Iju mmiri: mmemme ma ọ bụ ederede ederede iji gboo spam ugboro ugboro.
fps: Onye mbu nke gbara. Ejiri iji zoo aka na egwuregwu Onye mbụ.
fps: Mpekere kwa abụọ. Ejiri iji zoo aka na ọnụ ọgụgụ nke okpokolo agba ma ọ bụ ihe oyiyi na nke abụọ na vidiyo ma ọ bụ egwuregwu vidiyo.
Frag: Frag bụ ọnụọgụgụ ọnụọgụ ugboro ole ị gbagburu ọkpụkpọ ọzọ, ọkachasị na FPS.
FTL: "Maka ọnwụ", ejiri ya gosipụta iwe.
FTW: "Maka mmeri", ejiri ya gosipụta ịnụ ọkụ n'obi maka ihe.
FYI: "Maka ozi gị", nke ga - abụ "maka ozi gị"; eji mee ka ihe doo anya.
FU / fak yu /: “Fuck You”, oputara “fuck gi”
FYEO: "Maka naanị anya gị", nke pụtara "naanị n'anya gị".
FYM: iberibe nne gi
geek: / guik / onye nwere oke ochicho maka teknụzụ na kọmpụta, na-ekpuchi ụdị dị iche iche nke geek site na ọkwa dị mma nke mmasị na ọkwa dị egwu.
gamer: / gueimer / onye nwere mmasị na egwuregwu kọmputa yana / ma ọ bụ vidiyo vidiyo.
GTA- Nkpirisi nke egwuregwu "Nchekwa Izu Nchekwa onwe".
GTFO: Na na na anya / pụọ, na Spanish “pụọ”
GTG g2g: Gota Go / Gouta gou / putara "aghaghi iga" ma obu "aghaghm iga"
GL & HF: Jisie na nwee anụrị; Jisie na obi uto. Ndị na-egwu egwuregwu ma ọ bụ ndị ọrụ jiri akara okwu ndị a chọọ gị ọfụma na egwuregwu dị mma.
GG: Egwuregwu Ọma (egwuregwu dị mma). Ejiri ya na njedebe egwuregwu na ndị egwuregwu ndị ọzọ.
GF: Ogu Di Mma (ezigbo ogu). A na-ejikarị ya egwu egwuregwu.
Gvg: Guild veso Guild, na egwuregwu, clan against clan. A na-ejikarị ahapụta agha n'etiti ezinụlọ
GJ / Gj: Ezi oru (ezigbo oru). A na-ejikarị ya egwu egwuregwu ndị mbụ, iji kelee mmadụ ma ọ bụ otu, wdg.
GBA- Nkọwa maka “Game Boy Advance” njikwa egwuregwu egwuregwu vidiyo.
GW- Short maka Guild Wars online-egwu egwuregwu.
GoW: nkpirisi okwu banyere egwuregwu God Of War
GC: mkpirisi maka Good Charlotte na ikwu maka Nintendo Game Cube console.
Gratz: Ekele (na Spanish ekele)
GM: GameMaster (Onye njikwa egwuregwu)
hacker: / jáquer / okwu eji na-ezo aka na ọkachamara na otu ma ọ bụ karịa teknuzu alaka metụtara ozi teknụzụ na telekomunikashions bụ onye nwere mmasị na ihe ọmụma, na-achọpụta ma ọ bụ na-amụta ihe ọhụrụ na ịghọta otú ha si arụ ọrụ.
Hax : / Jacs / Ọ pụtara "Mbanye anataghị ikike" mana n'okwu "H4x0r". Na Netbattle a na-eji ya maka ọkpụkpọ "chioma" ebe ọ bụ na ha enweghị ike imebi Pokémon ha ma ọ bụ kụọ "Critical hit" ugboro ugboro.
HC: acronyms ndị a nwere okpukpu abụọ na Habbo Hotel, na mgbakwunye na ịpụta "Habbo Club" bụ ndị zụtara ego pụrụ iche na nkata a, a na-akpọkwa ya "Chulos Habbo" ndị ahụ na-emegbu ikike ndị ahụ ma nọrọ ihe ọ bụla n'ụbọchị na-ehichapụ ego ha, ọdịdị ha, mkparị, ma ọ bụ na-eme ka Trolls (na-akpọ ọtụtụ Noob) ma na-eleghara ndị ọrụ ndị ọzọ anya. Site n'ịghọ HC, ha na-ewekarị olu ha ịbụ mkpụrụ okwu atọ: HC, Vip na Noob.
HDP: in Spanish, ndebiri nke "Son Of Puta".
HFH: in Spanish, ndebiri nke “Hacela Fácil Huevon”.
AHUIKE: onye na-agwọ ọrịa, onye na-arụ ọrụ ọgwụgwọ.
hey: Ndewo (na Spanish: hello).
HL: Nwee Luck (na Spanish: jisie) na egwuregwu ịntanetị, tupu ịmalite, ịchọ ọchichọ; ọ pụtakwara ọkara ndụ (ọ bụ egwuregwu fps)
HОYGAN: mkpoputa okwu ure nke "nuru". Ọ na-ezo aka n'ụzọ satiriki na ihe odide ndị edepụtara edehie na ndị na-ede ha.
HMS: You merụrụ mmetụta m
HP: mkpụmkpụ maka "Nwa nkịrịka." "Health health" isi ike. "Ike ịnyịnya".
Ahịa HQJ: mkpụmkpụ maka "Fuck you!"
HS: / hs - jedshot / abbreviation maka “Head Shot” (: isi ogbugba). Ejiri ya na egwuregwu vidio.
Achụ nta: / hanted / okwu a na - eji isi egwuregwu ụfọdụ na - ezo aka na mmadụ na - agwa ya na a na - achụ ya (ndị egwuregwu ahụ agaghị akwụsị igbu ya), ọ bụrụ na nwoke ekwuo na ọ bụ otu: àkwá "ma ọ bụrụ na ọ sị na nwanyị bụ otu ihe yiri:" onye n'ike ị ga - anwụ "n'ọnọdụ ọ bụla ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu.
Hype: ngwaahịa nke na-eweputa otutu ihe ichoputa na-emeputa "hype". A na-eji ya maka egwuregwu vidio a na-echere ogologo oge, ịga n'ihu sagas, wdg.
IMO / IMHO / IMAO: acronym for "In My Opinion" / "In My Humble / Honest Opinion" / "In My Arrogant Opinion", English version for EMHO, “In My Humble Opinion”.
IRL: acronym for "Na ndụ n'ezie" ("na ndụ n'ezie").
ICBI: acronym for "Apụghị m ikwere na ya" ("Enweghị m ike ikwere ya").
IMBA: ndebiri nke ahaghị nhata na pụtara unbalanced / disproportionate. A na-eji ya mgbe onye ọkpụkpọ dị elu karịa ndị ọzọ, ya bụ, ọ na-akwụ ụgwọ.
IM: Ozi ngwa ngwa, nke ga-adị ka nkata
IC: Insert Coin, bu nke ejiri mee ka ị nọgide na-egwu egwuregwu igwe, ma ọ bụ igwe oghere.
MGBE: acronym of "Na okwu ozo" ("na okwu ndi ozo").
ILU: Ahụrụ m gị n'anya (U na-anọchi gị) ịsị na m hụrụ gị n'anya n'ụzọ dị nkenke ma dị nkenke.
IGM: Na Game mesage A na-eji nkewapụta ozi ịntanetị na-arụ ọrụ n'ime egwuregwu.
JIC: acronym for "Naanị na ikpe" ("Naanị ma ọ bụrụ na").
JK: acronym for "Nnukwu Nwa" ("Just kidding").
Jemer: (dị ka KS) eji eme egwuregwu na-ezo aka na ndị na-egbu nnukwu anụ ndị ọzọ, si otú a na-ewepu "ahụmịhe" ha (Ihe e si na anụ ọhịa ahụ nweta)
K / KK: acronym for "OK" ("Odi nma, dikwa mma"). Na Spanish, "que" (KAY ma ọ bụ Q na-ejikwa ya). Mgbe ụfọdụ, ọkachasị na MMORPGs, K na-esonye ya na igwe igwe nri (2k = 2.000) na kk nde (2kk = 2.000.000)
KEWL: synonym of the word "mma" (ukwu)
KS: acronym maka "Gbu ohi" na egwuregwu ịntanetị, ọkachasị MMORPGS, bụ omume nke izu ohi ụgwọ ọrụ nke igbu onye iro, mgbe ụgwọ ọrụ ahụ nwere ike ịbụ akara ahụmahụ, ego ma ọ bụ ụfọdụ ihe.
KH: Ndebiri iji kwuo maka egwuregwu na-egwu egwu "Obi Alaeze"
OZI: Ndebiri nke egwuregwu "Eze alụso"
KI: Mbipu nke egwuregwu "egbu egbu mmuo"
otu: nsogbu isi ike kpatara site na igbu oge nkwukọrịta na-emekarị site na ọdịda na njikọ ịntanetị.
Ira ihe: / Leimar / onye nke ọkụ ole na ole (ihe na - abụghị nke hacker, amaghị etu esi eji kọmputa) onye na - emekwa ngosi nke ịmara. A na-ejikwa ya na egwuregwu ndị dị n'ịntanetị iji zoo aka na ndị egwuregwu ahụ nwetara akara site na igbu ndị egwuregwu na-enweghị nchebe (na-enweghị ngwa ọgụ), offline ma ọ bụ na lag na ndị na-amaghị etu esi egwu ma ọ bụ Newbies. ndị na- Ha na-awakpo ndị na-emegide isi na-enweghị na-esonyere kọmputa-jisiri creeps.
LE: "Enwetara m ya".
Leecher: onye na-erite uru site na akụrụngwa nke ndị ọzọ na-enweghị inye ihe ọ bụla na nloghachi. Dị ka ihe atụ, anyị nwere njikọ ihe oyiyi sitere na sava ndị ọzọ na-enweghị ikike, ma ọ bụ n'ihe gbasara P2P, onye na-ebudata ọtụtụ ihe mana ọ na-ekerịta ole na ole.
Leet: / lit / na mbụ l33t ma ọ bụ 1337 na ASCII, pụtara ndị ọkachamara, mmadụ ma ọ bụ otu ndị dabara adaba n’ihe gbasara sayensị kọmputa.
akpa ọchị: acronym for "Loser on Line", "Na-achị ọchị", yana "Lot Of Laughs", mkpọtụ na-eme mkpọtụ ma ọ bụ na-achị ọchị bụ ntụgharị ya n'asụsụ Spanish. Ọ bụ ezie na nkọwa ya nwere ike ịdị iche na-adabere na nkata ahụ, enwere ike iji ya dịka ọmụmaatụ ịchị ọchị n'ọnọdụ na-emebeghị, jiri akaja mee ihe ọchị.
LMFAO: / Limfao / acronym nke vulgarism Na-achị ọchị My iberibe ịnyịnya ibu nke onye nsụgharị ya ga-abụ "na na na 'iberibe' ọchị" na-agbakwunyekwu mesiri ike na okwu "iberibe".
LMAO: / Limao / acronym nke vulgarism Na-achị ọchị ịnyịnya ibu m onye ntụgharị ya ga - abụ "ọchị na ọchị".
LP: acronym nke American "Linkin Park", "Long Play"
LPMQLP: Argentine acronym for "Ekwu mara"
Lulo: Cheater, okwu a na-ejikarị na egwuregwu ịntanetị "Counter Strike" iji zoo aka na ndị na-eji mmemme na-emetụta arụmọrụ nke agwa site na igbu ogbugba mbu na ihe ndị ọzọ.
L2: acronym maka ama egwuregwu na-egwu n'ịntanetị Lineage 2
Meme: ọ na - apụta na blogosphere na ọ bụ ọkwa na - agbasa site na blọọgụ na ntanetị iji mee ka ọnụọgụ ndị ọbịa bawanye.
Milf: acronym for "Mama m choro iberibe." A sụgharịrị ya site na MQMF a ma ama (Nne nke ga-ata m ahụhụ) site na fim American Pie.
MMORPG (Massive Multiplayer Online RPG): Massive ọtụtụ mmadụ na-egwu egwuregwu n'ịntanetị. Ọ bụ egwuregwu dị ka RPGs oge ochie (Final Fantasy, Diablo, Tibia, Baldurs Gate, wdg), mana gbadoro ụkwụ na Intanet na ọtụtụ mmadụ n'otu oge.
MP: Mana Mana: isi ihe, (a na-ekwu na Dofus ka Move points) na ọgbakọ ụfọdụ, a maara ya dị ka Ozi Nkeonwe ma ọ bụ Obi (ozi nzuzo)
M8: / meit /, putara enyi, enyi, wdg.
MF: mkpụmkpụ nke nne Fucker
MK: mkpụmkpụ maka egwuregwu ahụ "Mortal Kombat"
MCR: My Chemical Romance Na Na Na
NH: expression in English that means / Nice Hand /, na Spanish, ezigbo aka. A na-ejikarị ya na poker. Ejikwa ya agbachitere ndị oge ochie nke pụtara / Enweghị dike / nke na-egosi na ahụghị dike n’ebe egosipụtara.
NPI: acronym maka "Ebumnuche Ni Puta". A na-ejikarị ya na ebe ndị ahụ ị na-enweghị ike ikwu okwu rere ure, okwu rụrụ arụ, okwu rụrụ arụ, wdg.
Noob: / newbie / okwu eji zoo aka na newbie na egwuregwu ịntanetị, ọgbakọ ma ọ bụ ụwa nke inntanetị. N'egwuregwu egwuregwu n'ịntanetị, a na-ejikarị ya eme ihe nlelị maka ndị egwuregwu ahụ na-enweghị nkwanye ùgwù maka ndị egwuregwu ma ọ bụ iwu, ma ọ bụ na amaghị ha, na-ebute ha ma na-eme ka ahụ ghara iru ndị egwuregwu ndị ọzọ ala na mmepe nkịtị nke egwuregwu ahụ. (Ikwu okwu na egwuregwu kọmputa)
NP: expression in English that means / no problem /, na Spanish, nsogbu adịghị. A na-eji ya eme egwuregwu na ntanetị iji nye onye ọrụ ibe m ọsọ ọsọ na nkenke.
NS: Nkọwa nke / Nice Shot /, na Spanish, ezigbo ogbugba. A na-eji ya na ndị Shooters kelee onye ọzọ, ma ọ bụ enyi ma ọ bụ onye iro, n'ihi na ọ gbagburu ya ma ọ bụ bụrụ ezigbo egwuregwu.
NSFW: Enweghị nchekwa maka ọrụ, n'asụsụ Spanish "enweghị nchekwa maka ọrụ"; A na-eji ya egosipụta ihe ike, mmekọahụ ma ọ bụ ọdịnaya na-adịghị mma nke nwere ike ịbụ ihe na-ekwesịghị ekwesị na gburugburu ebe ọrụ.
N64- Mkpebi maka "Nintendo 64" egwuregwu egwuregwu vidiyo.
NFS: mkpirisi maka "Ọ bụghị maka ọrịre". A na-eji ya na egwuregwu iji gosi na ụfọdụ ihe anaghị ere ere. Ọ nwekwara ike na-ezo aka Mkpa maka Speed.
"O RLY?". O RLY? / YA RLY / NO WAI: / ohreli? - yareli - nowei / nkenke nke "Oh n'ezie?", Kedu nke a ga-atụgharị n'asụsụ Spanish dị ka "Kpọrọ?" A na-ejikarị ya eme ihe n'ụzọ mkparị tupu ihe doro anya ma ọ bụ na-emegiderịta onwe ya ma ọ bụ na nzaghachi nye ihe na-adịghị ekwenye ekwenye. A na-aza ya na YA RLY nke pụtara "Ee, n'ezie" (Ee, kpọrọ ihe), na-esote "NO WAI" (Ọ dịghị ụzọ, Ọ pụghị ịbụ).
OMG: / omj / bekee bekee maka "Oh Chukwu m!" onye nsụgharị ya n'asụsụ Spanish bụ "Oh Dios mio!".
OFC: / ofcurs / abbreviation n'asụsụ Bekee maka "N'ezie!" onye ntụgharị ya n'asụsụ Spanish bụ "Por Supuesto".
OMFG: / omfj / na bekee maka "Oh my Fucking God!" deformation nke OMG.
OMWmkpirisi ke bekee maka "On my way" na Spanish, "Anọ m na ụzọ."
Nwe: / ound / nke ndi hackers na ndi okacha mara komputa jiri mee ihe, okwu a na-ekwu maka imebi nchebe nke usoro, inweta uzo zuru oke ma obu ngba Ọ gbasaa n'oge na-adịbeghị anya, na-akọwa mmeri nke otu onye ọrụ gafere onye ọzọ na egwuregwu ịntanetị. Enwere ike ịhụ ya dị ka "pwned" / paụnd / nke amụrụ site na ederede na-ezighi ezi "nwe" dochie "o" maka "p". A na-ejikwa ya iji gosipụta amaghị ihe mmadụ banyere otu isiokwu, ma ọ bụ dị ka egwuregwu mgbe mmadụ mere ihe ọjọọ. Ndị ọzọ dị iche iche bụ 0wned, Own3d, pwned, pwn3d, na peded. Ọ bụkwa akwa ahịrịokwu nke kuki kuki.
OIC: mkpirisi ke bekee nke Oh! Ahụla m! onye nsụgharị ya bụ "Ahụrụ m"
OOP: / oop / nkenke bekee maka “N’abụghị Ebe” na Spanish ga-apụta “N’abụghị Ebe”. A na-eji ya igosipụta na ịnọghị na PC, a na-ejikarị ya na MSN Messenger iji gosi na ịnọghị kọmputa ahụ, na-abụghị ọnọdụ "Away".
PCW: mmegharị nke Bekee "Practical Clan War", "Party Friendly". Tumadi eji na fps egwuregwu.
Koodu ZIP: mmegharị nke Bekee "Biko", "Biko". Eji ya jụọ mmadụ ihe bara uru. A na-ejikarị ya eme egwuregwu MMORPG.
pr0n: mmegharị nke "porn" nke Bekee, na Spanish "porn". Ejiri iji zoo aka na ọdịnaya
ihe na-akpali agụụ mmekọahụ. A na-ejikwa ya "p0rn". Eji ya megharịa Okwu Myọcha nke MMORPGs
Gwuo: ọ dị ka mkpọtụ nke mgbe mmadụ dara..that ụda plop (dara n'ihi na ọ bụ nnọọ nzuzu ihe ndị ọzọ kwuru) ọ na-akasị ji na chats
PK: Player na-egbu. Ejiri ya na egwuregwu vidio, mgbe onye ọkpụkpọ na-egbu onye ọzọ n'enweghị ezi ihe kpatara ya, n'ozuzu ya na egwuregwu mmorpg.
Point: bụ ndebiri nke pakete, okwu ejiri rụọ ọrụ na egwuregwu ịntanetị iji gosipụta ndị agọnarị egwuregwu ahụ, lee amok
PRO: ọ bụ ndebiri nke Ọkachamara, a na-ekwu maka ndị ahụ maara etu esi ejikwa "egwuregwu" (kọmputa) nke ọma. Ejikwa ya zoo aka na egwuregwu Konami "Pro Evolution Soccer".
PTI: Ọ bụ Spanish version nke FYI, na ọ ga-apụta “N'ihi na Ozi Gị”.
PST: bụ ndebiri nke ọma na-aghọta site na ụda ... ihe ọ pụtara bụ ihe dị ka hey.
PvP: bụ ndebiri nke Player na Player (ọkpụkpọ megide onye ọkpụkpọ). A na-eji ya na egwuregwu MMORPG.
PTME: bụ mkpirisi Puta Madre. Ejiri ya karie ihe obula na nkata
PS: gbụrụ dị ka "ps" oe ps melas ... nke ndị Peru, ndị Venezuelan, ndị Mexico na ọtụtụ ndị Latinos na ndị Spanish na-eji.
PLR: Chili acronym maka "Kick In The Raja"
R0x : Okwu eji netbattle mee ihe maka onye ọkpụkpọ meriri ndị ọzọ na-eji naanị otu pokémon.
MGBE / ROTFL: acronym maka "Rolling On The Floor Laughing", n'asụsụ Spanish "Rolling n'ala na-achị ọchị" na nrụrụ nke LOL nke na-ezo aka n'ọchị a na-achịkwaghị achịkwa, mgbe ụfọdụ ihe mgbawa.
ROFLMAO: acronym for "Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na", Na Spanish "Na-agbagharị n'ala na-agbaji ịnyịnya ibu gị ọchị" ma ọ bụ "na-achị ọchị n'ala"
RTFM: / rìdefama / acronym for “Read The Fucking Manual”, na Spanish “Lee el puto / jodido / puñetero / culiao ntuziaka”. A na-eji ya na nzaghachi ajụjụ na-agaraghị adị ma ọ bụrụ na a gụọ akwụkwọ ntuziaka ahụ.
RU: acronym for "Ndi Gi?", "Ndi Gi?"
NMD: acronym for "emegharia", "Recreate". N'ọtụtụ ebe na egwuregwu ịntanetị iji bulite maapụ egwuregwu ọzọ.
RQL: Chechi (Chile). *
RLZ: iwu. ọ na-eji dị ka sị "nke ahụ bụ ihe kasị mma" ma ọ bụ "na iwu"
RS: mkpirisi maka egwuregwu RuneScape, ọ pụtakwara "respawn" (ọ bụ Spanish: isi ebe onye ọkpụkpọ ahụ ga-apụta ọzọ mgbe ha gbusịrị ya, ọ bụ n'ozuzu ya na otu ndị otu ya)
RSS: Nkọwa okwu ya na-egosi (Syndication dị mfe). N'asụsụ Bekee ihe ọ pụtara bụ "ibipụta isiokwu n'otu oge na mgbasa ozi dị iche iche site na isi mmalite nke ya"; akpọkarị "RSS faili ntanetịime".
RE: Mkpebi egwu egwuregwu ama ama "Onye ọjọ ọjọọ"
Nchapu: nzukọ nzukọ n'etiti ezinụlọ 2, nke kachasị na FPS.
STFU: Mechie Fuck Up: nwere ike izo aka na-ezighi ezi ka "Mechie ọnụ iberibe ahụ!"
STFW: Chọọ Web na-emejọ: "chọọ ntanetị weebụ", nke pụtara na ị kwesịrị ịchọ tupu ịjụ ihe doro anya.
OWO 1: Onye, mmadu.
nāpunara: site na "Spoil" nke Bekee nke pụtara ihe nkịtị bụ "imebi (ya), mebie (ya) ịla n'iyi, wdg." na etinyere pụtara nwere ike ịbụ "emebi ihe ibé ma ọ bụ ibé" na ike etinyere mgbe mmadụ kwuru na akwụkwọ, fim, egwuregwu, wdg ekpughe ọdịnaya ma ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ya.
SYL: See See Mgbe Emechara: “M ga-ahụ gị ma emesịa” na-ezo aka na "anyị ga-ahụ ibe anyị ma emechaa" ma ọ bụ karịa ka eji mee ihe n'asụsụ Spanish dị ka "anyị na-ahụ ibe anyị"
SBLN: ezigbo mma net, okwu eji ekwu na ị kwenyere
SPAM: Na Internet Forum, a na-akpọ "post" dị mkpụmkpụ na-enweghị isi na-erughị okwu 10 spam
SSB: obere maka egwuregwu "Super Smash Bros".
SF: mkpụmkpụ maka egwuregwu "Street Fighter"
SC: mkpirisi game "StarCraft"
ỌR.: mkpirisi nke bekee “Ndo” nke na Spanish bu “Lo Siento”.
EGO: tank melee-ụdị ọkpụkpọ na-eduga otu (egwuregwu-egwu egwuregwu)
Nyochaa: acronym of "A makwaara dika", n'asusu bekee AKA, "A makwaara dika".
TK: Egbu otu. Ejiri ya na egwuregwu vidio, mgbe onye ọkpụkpọ na-egbu onye ọzọ nke otu ya na-enweghị ihe kpatara ya, na ndị na-agba otu egwuregwu n'ozuzu TFTI: acronym maka "Daalụ maka ama ahụ", n'asụsụ Spanish "ekele maka ozi ahụ." A na-eji ya n'ọtụtụ okwu n'ụzọ ịkpa ọchị ma ọ bụ n'ụzọ ịkwa emo maka ihe doro anya banyere nke a na-enye ọtụtụ ihe na ngafe.
TLDR: acronym for “Ogologo oge, agụla akwụkwọ” (toro oke, agụla ya). A na-ejikarị ya eme ihe na nnọkọ.
Troll: onye na-eme omume akpaghasị naanị ebumnuche nke ịdọrọ uche na iwe.
Ty: Daalụ, na Spanish, daalụ nke ukwuu.
THX: Daalụ, daalụ
TNX: Daalụ, gracias [ụzọ ọzọ isi asị Daalụ] TMTH: Ka imee ihe
U2: Gi onwe gi kwa, gi onwe gi, otu.
U: Gị, gị, gị.
UR R8: Ikwuru, ikwuru.
Vip: Onye Dị Mkpa Dị Mkpa.
Ndịna: Oge Dị Ezigbo Mkpa.
WTB: acronym "ichoro izu" eji na egwuregwu intaneti. Tughariara "Achọrọ m izu"
WTF / guatafak / : acronym for "Gini bu ukpa?" (Mana kedu fuck / fuck / shit / weá?), Nkwupụta na bekee iji gosi ihe ịtụ n’anya ma ọ bụ ihe ịtụ n’anya, ma ọ bụ igosi esemokwu.
WTH: acronym "Gini bu igwe oku?" (Kedu ụdị iberibe bụ nke a?)
WTS: acronym "choro ire" eji n'egwuregwu egwu. Tugharia ya "Achọrọ m ire"
WTT: acronym "choro ahia" nke eji na egwuregwu intaneti. Tughariara ya "Achọrọ m ịzụ ahịa"
W8: pụtara Chere, n’ihi na n’asụsụ Bekee akpọ 8 ahụ “asatọ” ma ọ bụrụ na akpọrọ W + 8, ọ bụ otu ka esi akpọ ya Chere (na Spanish: chere).
CHAỊ: acronym maka "World of Warcraft", egwuregwu MMORPG a ma ama site na Blizzard
XOXO: eji egosi nsutu, obu ya bu okwu eji egosiputa “nsutu na mmasi”
xD: eji gosi ọchị. Ọ bụghị ntụgharị. Ọ na-anọchi anya ihu ọchị, "x" bụ anya mechiri emechi na "D" bụ ọnụ ọchị
xP: a na-egosiputa ochi site na ichighari ire (dika "Naughty"). O nweghi ntughari. Ọ na-anọchite ọchị ọchị, "x" bụ anya mechiri emechi na "P" bụ ọnụ na-amịpụta ire.
Xxx ma ọ bụ xxx: Ebupụtara ndebiri nke "Kisses", n'ozuzu ha na-eji asị onye ọ bụla, na nkata ma ọ bụ email.
Ọpụpụ: sitere na Bekee “Ahụmịhe”, iji gosipụta ahụmịhe nke onye ọkpụkpọ, ma ọ bụ enwere ike iji ya dị ka XP, Ọ nwekwara ike iji ya gosipụta ịchị ọchị na ire ya pụọ ​​xP
Isi: Ederede si n'aka GUTL.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Geek Dictionary, ụfọdụ okwu na-eji na net na anyị adịghị aghọta
Ọ dị m ka noob>.
0.0… Amaghịdị m okwu 10… ọ na-agara ndị ọkacha mmasị m
Ezigbo ozi maka ịntanetị n00bs.
Agbanyeghị maka ntụnye ọsọ ọsọ m masịrị iji Akwụkwọ ọkọwa okwu Urban ma ọ bụ Slang Internet (ha nwere ike ịnweta isi ihe site na nnukwu Chromium).
N'ebe ahụ ka ọ dị, site n'ụzọ: M3H43NC4N74D0L0D335CR181R3N L337
€ $ Ø n0 3S Näðæ © øµþ4®æÐ0 ¢ Łn Ł0 Ωü € ¥ ø ¥0 ¥ © z4z Ð € Ħ4 ¢ 3®
nke ahụ abụghị ihe e jiri ya tụnyere nke m nwere ike
NA nke m dere na Spanish, BWAHAHAHAHA
4] 4] 4] 4] XNUMX !!!
Are bụ cani ee ma ọ bụ ee
Orale na ezi vibes, daalụ nke ukwuu maka ọkacha mmasị ADD post
Zaghachi Baron Ashler
I bukwa cani
Agbanyeghi na echere m na post dị ka ntụnye aka dị mma ma na-akụzi ihe, echere m na ụdị ihe a na-eweta nghota nke asụsụ ma na-egbochi nkwukọrịta kemgbe, otu ihe bụ iji asụsụ teknụzụ na ihe ọzọ ịchọrọ ịbelata ma ọ bụ mebie okwu ndị a dị ka a ga-asị na mmadụ na-akwụ ụgwọ maka ide nke ọma ma ọ bụ leta.
Ha ga-ekwenye kpamkpam, n'oge na-adịghị anya, ha ga-emepụta ihe ga-enwe ike ịtụgharị okwu na webụ.
Ọ bụ ihe ihere na etu okwu Spanish si baa ọgaranya na n'ụba n'ụdị ya niile na anyị ga-eji usoro ndị a "nkwukọrịta" pere mpe.
Zaghachi ka ị dezie ya
Kwere m, m so na ndị mbụ na-ata ahụhụ site na hives mgbe m hụrụ nkọwa dị ka nke a:
M ga - asị na enweghị m ike ịga SiteLinux ..
Ma ebumnobi nke edemede a bụ naanị inye nkọwa banyere usoro eji, ka anyị wee ghara ịla n'iyi 😀
hahahaha ịsụ asụsụ ịntanetị na-atọ ụtọ, ọtụtụ maara ha na ndị ọzọ ahụtụbeghị ha, ihe m kpọrọ asị kachasị dị ka elav na-ekwu «zzZZzonNn LazZ p3rzZzonAz ke 3ZzkriBenNn azZzi» aaaaaaaaaiiiiisshhhh na-ewe m iwe!
O bu asusu ozo !!! A ga-ekpochapụ asụsụ niile ma nke a ọ ga-abụ dị ka asụsụ zuru ụwa ọnụ? hehe
Zaghachi na Competenciaperfecta.com
Akpọrọ m asụsụ ndị mba ọzọ asị na ịntanetị. Uff ... Naanị m na-asụ Spanish na bekee, enweghị m mmasị n'ịmụ asụsụ ahụ hahahaha afọ ole na ole gara aga "h4cx3rz 3skr1b14an 4s1" wee jụọ m maka "mmemme mbanye anataghị ikike" hahahahaha kedu oge mara mma ndị ahụ 😛
MDR: site na francophone forums «mort de rire», «nwụrụ n'ọchị»
Ngwa ngwa nwa m nwoke cn edere ndị enyi ya na koodu 8 ma ọ bụ 9 ma ọ bụ 10 ị nwere ike ịgwa m ihe ọ pụtara?
AHA M HOVR N N’AFỌ B IF Ọ B IFR I NA M P TRAL TONTI ND MY MMAD AS ANY I KWURU
Zaghachi JEAN CARLOS RODRIGUEZ
Ọ dị mma, ọ bụrụ n'ụzọ a ka ị ghọtara nke ọma ihe niile na weebụ,
Mana okike bu ihe kacha mma,
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu n ’ndebiri na nchọnchọ okwu, ọ ga - afọ obere onye ga - aghọta anyị. 🙂
Na-akpali nnọọ mmasị. NKM
Zaghachi Rolando Medrano Pacheco
Enwerem ajuju putara mgbe nwanyi kwuru "Enwere m obi uto na ekele gi (M)"
Ọ bụ ma ọ bụ bụ enyi m nwanyị, mana nke bụ eziokwu bụ na m adịchaghị mma na nke ahụ, ọ jụrụ m obere oge na achọrọ m ịma ihe ọ pụtara, biko
Nwere ike ịgwa m ihe XLZP pụtara? biko tinyekwara QDCB?
Anọ m na-achọ m8: v 2spooky5shrek KK
Naanị m chọrọ ịma ihe akwụkwọ ozi ndị a pụtara ma ọ bụrụ na ha dị na faceboook ma ọ bụ ụfọdụ netwọkụ ngdgda
Daalụ, abughi m ọtụtụ egwuregwu, nke a ga-enyere m aka XD
Onye nwere ike ịgwa m ozi a:
MI _}} $}}
Ubuntu Ekwentị ga-adị na February 21
Apper: Jikwaa ngwugwu gị na KDE